भूमिगत पानीकाे दाेहन, भासिँदैछ काठमाडौं ! - UrjaKhabar भूमिगत पानीकाे दाेहन, भासिँदैछ काठमाडौं ! - UrjaKhabar
काठमाडाैं- स्वदेशी र विदेशी भूगर्भशास्त्रीहरूको एक टोलीले काठमाडौं उपत्यकाको भू–सतहको अवस्थाबारे पाँच वर्षयता निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरूले भूगर्भशास्त्रीहरूलाई अचम्भित बनाएको छ । अध्ययनमा संलग्न त्रि–चन्द्र क्याम्पसको भूगर्भ विभागका प्रमुख अनन्त गजुरेल भन्छन्, “अनुमान गरेभन्दा फरक तथ्य भेटिएपछि हामी नै अचम्ममा परेका छौं ।”
हिमाल खबर पत्रिका (उल्लेखित तस्बिर पनि हिमालबाटै साभार गरिएकाे हाे ।